Audi Q8 2019 (#705278) ကို Latha ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရာင္းရန္ရွိ | CarsDB
7910 total views,7today
Lot Number: #705278
လူကြီးမင်းတို့အတွက် ဂျာမနီထုတ်ကား 2019 မော်ဒယ်ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Audi Q8 Quatro (SUV) ကားကြီးရောင်းဖို့ရှိပါတယ် ။ 3.0 Liter V6 Twin Scroll Turbo Charge Petrol Engine တပ်ဆင်ထားပြီး 8 Speed Auto Transmission ဖြစ်ပါတယ် Audi ရဲ့ နည်းပညာဖြစ်တဲ့ 48V mild-hybrid technology ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် ဆီစားနှုန်းကို လျော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ခန့်ညားတဲ့ ကားဒီဇိုင်းပိုင်း မီးခွက် ရှဲ တို့မှာလည်း မြင်သူငေးလောက်တဲ့ ကားကြီးဖြစ်ပြီး ရှားပါးတဲ့ Dragon Orange Metallic Colour ဖြစ်တဲ့အတွက် ပွဲတတ်ပဲစီးမလား နယ်ဝေးပဲထွက်မလား စိတ်တိုင်းကျစေမှာ သေချာပါတယ် ။ ပါဝင်တဲ့ နည်းပညာမြင့် Feature Function တွေကတော့
- HD matrix design LED head light with animation
- 22 inch5double arm design alloy wheels.
- Permanent all-wheel drive quattro ® with an asymmetrical dynamic torque distribution
- electromechanical parking brake.
- Start / Stop system witharecuperation system
- Stability control system ESC with additional off-road functions, includes off-road mode , Roll - over stabilization
system, trailer stabilization function
- Driver Information System with 7-inch color display includes driver fatigue monitoring
- Parking Assistant with rear sensors
- Cruise control with speed limiting function
- AC with4zone climate control.
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Hein Wunna Hlaing မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Audi Q8 2019 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။